Ilay mpikarakara kintan'ny PSG Neymar izay nanohitra an'i Barça dia voasazy - teles relay
Ny mpanamory kintan'ny PSG Neymar ho fanoherana an'i Barça dia voasazy
By bryanekobe On Jona 20, 2020
Nisy fitsarana tao amin'ny zoma tamin'ny zoma lasa teo nanameloka ilay mpikatroka kintan'ny PSG Neymar hamerina vola 6,79 tapitrisa euros ho an'ny FC Barcelona, ​​ny ekipany taloha.
Famaranana ny tantara teo amin'i Neymar sy Barça? Na izany na tsy izany, ny fitsarana nivoaka tamin'ny zoma 19 jona, dia vato mahatafintohina fanampiny amin'ity raharaha ity, izay manimba ny fifandraisan'i "Ney" sy i Barça hatramin'ny niverenany tany Paris tamin'ny taona 2017.
Ny fitsarana Espaniola dia nanala ny mpanafika PSG, izay nitaky vola 43,6 tapitrisa Euros amin'ny karama tsy voafehy ary nanome baiko izy hamerina vola 6,79 tapitrisa Euros amin'ny mpiara-miasa aminy, ka mitaky ny hypotesisma fiverenan'ny breziliana ho any Barcelona.
Ny hevitra ny hahita an'i Neymar any Katalonia dia manelingelina ny tsenan'ny famindrana mandritra ny telo taona, fa ny fotoam-pitsarana dia tsy ilay fikandrana famindrana, ary ankehitriny, mihamalalaka ny elanelan'ny roa tonta.
Tamin'ny famaranana ny fifanarahana nataony tany Barcelona talohan'ny fiafaran'ny farany, dia "tsy nanan-jo handray ny vola" iany i Neymar, ary tsy maintsy hamerina ny club ny fahitana fa be loatra ny saran'ny fanitarana, nanatsahatra ny fifanekeny tamin'ny tsy fanamarinana, "nanapaka ny fitsarana Barcelona tany amin'ny fitsarana ny zoma teo.
Tamin'ny fotoana nifindrany tany Paris ho an'ny vola mitentina 222 tapitrisa Euros, i Neymar dia nanatontosa dingana mba hahazoana ny fandoavam-bola feno an'i Barça amin'ny fidiram-bola fanampiny 64,4 tapitrisa euros talohan'ny hetra. saingy nandà ny fangatahany ny zoma ny fitsarana.
Neymar dia manakaiky ny fiverenany any Barça amin'ny taona 2019
Ity raharaha ity dia mifameno bebe kokoa ny zava-misy amin'ny mety fiverenan'ny "Ney", 28, ho any Barcelona, ​​izay nijanonany efa-taona (2013-2017), nandresy ny Champions League tamin'ny taona 2015.
Nandritra ny fahavaratra tamin'ny taona 2019, nahatsapa fahalianana amin'ny fampodiana an'i Neymar hiverina any Catalonia i Barça, ary nahita «fifanarahana am-bava» tamin'ny mpilalao araka ny filazan'ny mpanao gazety ihany koa. Saingy tsy nahavita nandresy lahatra ny PSG ny mpitarika ny Katalanista.
Nihazakazaka nanakaiky ny lohateny Espaniola i Madrid tamin'ny fandresena nahatratra faha-7
Tatitra: Upset Messi mitady handao an'i Barcelona
Vokatr'izany, ny fanesorana ny fitarainan'i Neymar talohan'ny fitsarana Espaniôla, izay voalaza ho fepetra takiana an'io "fiverenan'ny famerenana" io, tsy nisy na inona na inona fa ny fitarainana napetrak'i Barça.
Ny klioba blaugrana, izay efa nandoa ampahany tamin'ny bonus tamin'ny mpilalao (20,75 tapitrisa euros) dia nanantena ny hamerina ny fitambaran'ny vola voalohany, ary hahazoana fanampiny 8,5 tapitrisa euros amin'ny fahavoazana mahaliana.
Ireo samy roa tonta dia henohenina tao amin'ny tribonaly indostria tamin'ny 27 septambra, ary avy eo dia namoaka ny fehin-kevitra nataony izy ireo ny 21 Oktobra.
Miaraka amin'ny PSG amin'ity fahavaratra ity amin'ny League of Champions
Barça, izay niarahaba tamina fanambarana iray tamin'ny fanapahan-kevitra noraisiny tamin'ny zoma, saingy na izany aza dia nampatsiahy fa afaka miantso ny mpanafika ary mbola hitohy ny fikambanana "hiaro amim-pahatokiana ny tombotsoany" alohan'ny fahamarinana.
Ny famintinana ny herinandroFrance 24 manasa anao hiverina amin'ny vaovao izay nanamarika ny herinandro teo
Misoratra anarana aho
Raha ny fiadiana ny amboara frantsay dia nijanona am-pahataperana noho ny valan'aretina Covid-19 ary tsy hitohy ny Champions League mandra-pahatongan'ny volana Aogositra, niverina tany Frantsa ny asan'ny PSG ny sabotsy lasa teo, rehefa avy nandany efa ho telo volana ao an-trano any Brezila.
Mbola mankasitraka ny mpiara-miasa taminy taloha tao amin'ny efitrano fidiovana Barça, ny mpikatroka dia miomana hahita ireo mpiara-miasa aminy Paris amin'ny alatsinainy ho an'ny andiam-panadinana ara-pitsaboana sy fitsapana ara-batana izay hanomboka ny fahavaratra amin'ny PSG. Saingy mbola hisy ihany ve any amin'ny faran'ny varavarankely famindrana, antenaina amin'ny 5 Oktobra?
Ny krizy ara-toekarena nateraky ny valanaretina dia nampihena ny fototry ny klioba, izay nanambara ny fikandrana fitodihana malefaka kokoa.
Amin'izany toe-javatra izany, sarotra ny maminavina ny fialàn'ny mpilalao lafo vidy indrindra amin'ny tantara, eo am-panatontosana ny PSG hatramin'ny 2022 ... ary na ny ankehitriny aza dia voahazona ao amin'ny efitra fitsarana ny fifandraisany amin'ny mpifaninana aminy.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://www.france24.com/fr/20200619-football-justice-espagnole-donne-raison-barca-contre-neymar-psg
Eudoxie Yao Miresaka momba ny fivarotana ny akanjo ambaniny efa nampiasaina
AfricaaforBlackLives, sarin'ireo mpanakanto afrikana manao fanentanana amin'ny herisetra fanavakavahana
Angano momba ny baolina kameroney: Joseph Yebga Maya